Aha! Jokes, Satire » ခြစ်ခြင်းတယားနဲ့ ပီဒေါင်ဇု	25
ကျေးဇူးတင်ဘာာားးးးးးဒယ်~~ သချင်းတိုက်ကူပေးတဲ့ ချစ်တနယ်ဂျင်း တုံချိန် နဲ့ သချင်းဆိုဖို့ အကြိန်ကြိန်အားပေးဂဲ့ဒဲ့ အာကိုယီး ကဖက်ကက်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ဘာာားးးးးးဒယ်~~ hehee :P
ဒီလိုမဟုတ် ဒီလို :D
View all posts by CharTooLan →	Blog
တောင်ပေါ်သား says: မိုက်သဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7303
etone says: ဘယ်ညာဆွဲပီး ဆိုယေ ချာချာရဲ့ …
ဇာတိတွေး ဇာတိမာန်ယေးလည်း ပါတွားအောင် ….. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတော့ဖြင့် ၀ါဒဖြန့်သီချင်းတွေ… ပေါ်လစီသီချင်းတွေ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: လက်ပံတောင်းတောင် ပဋိပက္ခ အမျိုးသမီး တစ်ဦး သေဆုံး
ဒီလ ၁၃ရက်နေ့ကလည်း ကုမ္ပဏီနဲ့ ဒေသခံတွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လယ်သမား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ——————-
CharTooLan says: အားလုံးဘဲ……….. ကျေးဇူးတင်ဘာာာားးးးးးးဒယ်…………
ပန်းကုံးတွေ ပန်းဂွေတွေ…ဘာတွေ… အနီးကပ် စွပ်လို့ရတယ်နော် အူးမျိုး :D
အဝေးကလဲလှမ်းပစ်စွပ်လို့ရဒယ် kwi kwi :P
etone says: ငြိမ်းချမ်းရေးဂို လိုလားလို့ နှစ်ခေါက်ပျံလာဖတ်တာ…. ။ ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ပြီထောင်ဇုတော့ စိတ်အဝင်ဇားဝူးးး
kai says: အမေရိကပြည်ထောင်စုကတော့.. အခုထိမပြိုကွဲသေး…။
လှသား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4108
Foreign Resident says: ” လှသား.. ”
sorrow says: ..ကျော်လေ..သူ့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖူးသဗျ..လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်တုန်းက…အဟိဟိ ..ကချင်ဘုရားကျောင်းမှာ သူက သီချင်းဆိုတာဗျ…အဟိဟိ ..မပြောရဲခဲ့တာ..ခုများတော့..အတဲလေးရယ်…ကယ်ပဲ
ခင် ခ says: ထိုထိုပုံစံနဲ့ မဲရရှိရေး စည်းရုံးရေးဆင်း လိုက်ကာဖျော်ဖြေရင် ၀က်ဝက်ကွဲဘဲဗျို့။ အားပေးလိုက်ကြမှာအမှန်ပင်။
ဖားသက်ပြင်း says: မျိုးခြစ်​စိတ်​မရှိတဲ့ဘာမန်​​တေ
Iris says: အား​ပေးမဲ့အမာခံပရိတ်​သတ်​ကြီးတစ်​​ယောက်​လုံးရှိတာများ ဆက်​ဆိုပါ။ :-D
ဖားသက်ပြင်း says: ဒါမိုးက ညီမ​ငေး​တေ၀တ်​မှလှတာခည
uncle gyi says: ပြည်ထောင်စု
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ သီချင်း ကို အဲဒီ မိန်းကလေးက ဆိုတာလား။
ဖားသက်ပြင်း says: အဲ့သီချင်းက မ​ဟေမာ စဆိုခဲ့တာမှတ်​တယ်​
ဦးဦးပါလေရာ says: .ပြည်ထောင်စု ဆိုရာမှာ
La Yeik says: အမွန်းလေး မိုက်ပါဒယ် အူးလေးရဲ့…..
မွသဲ ( 17082011 ) says: ပြီထောင်စုအောင်မယ်မင်း ပြည်ထောင်မှာပဲစုဒေါ့မာလား တရုတ်ပြီသူ့ သန်းမဒညန်မာနိုင်ဂံဒေါမှာ ဘိုနေရမာဒုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်…….
ကျနော်က ပီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်း ရွာထဲနဲ့ ဖွဘုတ်မှာ ပွဲအစူဇုံးကေ့စ်နှစ်ခု ကိုတွဲထားတာဘာ ပြည်ထောင်စု…. ဆိုတာကတော့……………
ပြည်မြို့က ထောင်ထဲမှာ စုထားတာလို့ အူးဇာဂနာပြောတာကြားဖူးတာဘဲ :D
ဒါနဲ့ခဏခဏမန့်သူယီးက ပြည်ထောင်စုထက် အမွန်းကိုပိုဓါတ်ကျတယ်ထင့် :P
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒီသီချင်းကို ပထဦးဆုံးဆိုတာ ဟာဂျီဦးခင်မောင်ထူး ပါကွီ…
Shwe Ei says: -လာမဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမာ အိုက်သီချင်းကို ကာလာအိုကေ ဆိုကြမလား ???
(ရွာသူားများ စည်းလုံးညီညွတ်ပီး ရွာချစ်စိတ်တွေ တိုးလာအောင်လေ) :P
ခင်ဇော် says: ဆိုနေရင်း ကီးတွေ မကိုက်လို့ …
naywoon ni says: အဲ့ သခြင်း ကျားယင်​ မဆာလာနံ့ ပါ နံ လာသလိုလိုဘဲ ​အောက်​ခံ ​ဂျေး ​ပြောင်​​အောင်​ မချွတ်​ပဲ ​ပေါလစ်​ဆီ ​တွေ တင်​ဂျမ်းတိုက်​ထားတဲ့ ဆက်​တီခုံ ကို ပဲ မျင်​​ရောင်​​နေမိဒယ်​ ဂယ်​​ပျော ဒါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.